Waa kuma waddaniga saxda ah??? | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Waa kuma waddaniga saxda ah???
Waa kuma waddaniga saxda ah???
Jan 4, 2016 asagoo fadhiya shirka madasha ee looga arrinsanayay kala guurka ayuu cod-baahiya qaatay; wuxuuna daqiiqad gudaheeda helay sacab iyo taageero; qaarbaa yiri waa waddani dhab ah. Axmed Madoobe oo hor iyo hareera fadhiyaan Shariif Xasan, Cabdiweli Gaas, Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa ku yiri Xasan Sheekh Maxamuud, “Inta aan halkaan fadhino calaladaan horteenna yaalla inta la qaado calanka Soomaaliya ha nagu filnaado”.
Sacabka is qabsaday mid la mid ah waxaa meel walba oo uu u duulo laga la hortagi jiray hoggaankii Xisbiga Tayo, RW Farmaajo. Wuxuu sheegay in uu diyaarad gaar ah oo $30,000 diiday, qol $1,500 hotel ah diiday. Wuxuu sheegay in askari asaga ku dayday uu diiday $300,000 si boorso aan la baarin u gudbiyo.
U kala dhuumashada Itoobiya iyo Kenya marka ay dhammaato, mowqifyada is burinaya ee laba siyaasi way is dhamaystiri doonnaan, hadal macaan oo isku dheelli tira haddii ay ku daraanna sacabka halgiisa ayuu ka soconayaa. Tusaale ahaan madaxweyne Farmaajo wuxuu dhihi karaa, “cambuulo galley ayaan galab walba ku qadaynayay ayagoo al Foorno madaxtooyada Rome la iiga keenno”, Axmed Madoobena wuxuu dhihi karaan, “qori cabbaysan, oo ammaankiisu furan yahay weligay ma arkin, AK 47-na haba sheegin; adduunka ayaan ugu necbahay”.
Qof gef uu galay ama lagu tuhmay ay galaafatay inta aan xusuusto waa in yar oo uu Xuseen Caydiid ka mid yahay!
Inta kale taariikhdu waxba uma dhinto, is burintoodu waa uun is dhamaystir.
Waddaniyadda la kufsado ma dhammaanayso illaa taageerayaasha qaaska ah iyo dadka ugu dhow ay qabtaan qofka is buriya!
Waddanigu ma aha fannaan maalin heesay, ee waa cannuga asagoo 9 jir ah qalinkiisa amaahiya ardayga ku fasalka ah ee aan heysan agabkaas, ama hooyo waayeel ah usha u qabta, illaa uu ka weynaadana dadkiisa caawiya!